१५५०.४३ विन्दुमा नेप्से, करीब २ अर्ब बराबरको शेयर खरीदविक्री
असोज १४, काठमाडौं । बुधवार नेप्से परिसूचक १ हजार ५५० दशमलव ४३ विन्दुमा पुगेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३ दशमलव १९ अंक घटेको हो । बुधवार १९० ओटा कम्पनीको रू. १ अर्ब ९५ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
यस दिन दुई ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको हो । कामना सेवा विकास बैंक र जोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको हो ।
८ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीको दरले वृद्धि भएको छ । शेयरमूल्य वृद्धि हुनेमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । कारोबार भएका १९० कम्पनीहरुमध्ये ६१ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य वृद्धि भएको छ । ८९ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको र २० ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी शेयर खरीदविक्री नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भएको छ । कम्पनीको रू. ११ करोड २४ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । सर्वाधिक कारोबार हुने दास्रो कम्पनीमा करुण काबेली पावरको रू. ९ करोड ७८ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।
बुधवार नेपाल फाइनान्स कम्पनीका शेयरधनीले धेरै गुमाएका छन् । कम्पनीको शेयरमूल्य ६ दशमलव ८७ प्रतिशत घटेको हो । यस कम्पनीको शेयरमूल्य केहि दिन यता ९ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले वृद्धि भएको थियो । शेयरमूल्य बढेसँगै क्रेताभन्दा विक्रेताको संख्यामा वृद्धि भएकाले कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको हो ।
कारोबारमा आएका १२ समूहमध्ये ४ समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक घटेसँगै नेप्से घटेको हो । परिसूचक बढ्नेमा सबैभन्दा बढी विकास बैंक समूहको परिसूचक १ दशमलव ८७ प्रतिशत बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै व्यापार समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत घटेको हो ।